July 2015 ~ Htet Aung Kyaw
အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလနှင့် တပ်မတော်များ ပြန်လည်စုဖွဲ့ရေး ပြဿနာ
6:50 AM Htet Aung Kyaw 1 comment
Friday, 31 July 2015, The Voice Daily.
တပ်ချုပ်နှင့် ဘီဘီစီ အင်တာဗျူး
ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် အမတ်လောင်းစာရင်းတွေ အပြိုင်အဆိုင် ထွက်လာခြင်းနဲ့အတူ အခုတစ်လော ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားမိတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကတော့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ဘီဘီစီ အင်တာဗျုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ အဲဒီအင်တာဗျူးဟာ မိနစ် ၃၀ ကျော်အထိ ရှည်ပါတယ်။ မြန်မာစစ်ဗိုလ်တစ်ဦး အနေနဲ့ နိုင်ငံခြားမီဒီယာတစ်ခုကို ဒီလို လက်ခံစကားပြောခြင်းဟာ ထူးခြားတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ ဘီဘီစီ သတင်းထောက်ကိုယ်တိုင်က တပ်ချုပ် မင်းအောင်လှိုင်ဟာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထက် ပိုမိုအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီး ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် ဖြေကြားခဲ့တယ်လို့ ညွန်းထားပါတယ်။ တစ်ခါ တခြားစစ်ဗိုလ်တွေ၊ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ မတူဘဲ ဆိုရှယ်မီဒီယာ Facebook အကောင့်ဖွင့်ထားတာ Like လုပ်သူ နှစ်သိန်းကျော် ရှိတာတွေကိုလည်း ထူးခြားချက်အဖြစ် ဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ (ဒီအင်တာဗျူးကို သူရဲ့ Facebook မှာ ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်)။
နောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ အရင်တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေလို ပြည်ပမီဒီယာတွေကို ရန်သူအဖြစ် သဘောမထားတော့ဘဲ မေးသမျှကို ဖြေကြားခြင်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူဖြေတာ လိုရင်းရောက်ရဲ့လား။ သမိုင်းကြောင်းတွေ သိပ်များနေသလား၊ Sound Bite ရအောင် ထုတ်နုတ် (သတင်းဖော်ပြလို့ ရအောင်) လိုတိုရှင်း မဖြေတတ်သေးဘူးလား ဆိုတာတွေကတော့ မီဒီယာနဲ့ ထိတွေ့မှု ဘယ်လောက်များများ ရှိနေပြီလဲ ဆိုတာအပေါ် မူတည်ပြီး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမယ် ထင်ပါတယ်။
သူပြောခဲ့တဲ့ Sound Bite တွေ (စကား) ကို အနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ လိုရင်းက နှစ်ချက်ပဲ ကျန်ပါတယ်။ အများပြည်သူက ဆန္ဒရှိရင် သမ္မတအဖြစ် ဆက်တာဝန်ထမ်းချင်တယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ ပြေလည်ပြီးမှ တပ်မတော်က စစ်တန်းလျားပြန်မယ် ဆိုတာတွေပါ။
ပထမအချက်ကတော့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အပါအဝင် စစ်ဗိုလ်လူထွက် နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပြောနေကျစကားမို့ သိပ်မထူးခြားပါ။ (အခု အသက် ၅၉ နှစ် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ တပ်ချုပ်ဟာ ၂၀၁၆ မှာ ပင်စင်ယူရဖို့ ရှိနေပါတယ်)။ ဒုတိယ စကားလုံးကလည်း အသစ်အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကိုယ်တိုင်က အတိအလင်း ထုတ်ပြောလာတာဆိုတော့ ဒီအချက်ကိုတော့ ဆွေးနွေးငြင်းခုံသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။
တိုက်ဆိုင်မှု ဖြစ်ချင်တော့ တပ်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ဘီဘီစီ အင်တာဗျူး ထုတ်လွှင့်တဲ့အချိန်ဟာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေရဲ့ အဆင့်မြင့် ညှိနှိုင်းရေးကိုယ်စားလှယ် SD (Senior Delegation) အဖွဲ့နဲ့ အစိုးရဘက်မှ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကော်မတီ (UPWC) တို့ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ (MPC) ရုံးခန်းမှာ အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးနေချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
MPC ခန်းမထဲက ၈ ကြိမ်မြောက် အပစ်ရပ်ဆွေးနွေးပွဲ (ဓာတ်ပုံ-ဧရာဝတီ)
“၈ ကြိမ်မြောက် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် (NCA) မူကြမ်း အချောသတ်ဆွေးနွေးပွဲ အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံး” ဆိုပြီး MPC ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက သူရဲ့ Facebook မှာ ဂုဏ်ယူစွာ ဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် တကယ်တော့ အဲဒီအောင်မြင်စွာဆိုတ ခေါင်းစဉ်ဟာ အစိုးရသတင်းစာတွေက သုံးနေကျ စကားလုံးထက် ဘာမှမပိုပါ။ နိုင်ငံတကာ အကူအညီနဲ့ ဖွင့်ထားတဲ့ MPC ခန်းမတွင်းက ၃ ရက်ကြာ ဆွေးနွေးပွဲဟာ အရင်က ဆွေးနွေးပွဲတွေလိုပဲ “မပြီးပြတ်သေးသော ကိစ္စများကို ရှေ့လာမယ့် အစည်းအဝေးတွင် ဆက်ဆွေးနွေးရန်” ဆိုပြီးသာ အဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။ သတင်းသမားတွေရဲ့ အဆိုအရ သဘောမတူနိုင်တဲ့ အဓိက အချက်သုံးခု ကျန်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမအချက်က အပစ်ရပ်လက်မှတ်ထိုးတဲ့အခါ တိုင်းရင်းသားတွေဖက်က (တိုက်ပွဲဖြစ်နေဆဲ ကိုးကန့်၊ တအာင်း၊ ရခိုင် အပါအဝင်) အဖွဲ့အားလုံး ပါဝင်စေချင်ပြီး အစိုးရဘက်ကတော့ အရင်လုပ်ထားတဲ့ ၁၇ ဖွဲ့နဲ့သာ ထိုးမယ်လို့ ဆိုနေပါတယ်။ ဒုတိယအချက်ကတော့ ဒီသဘောတူညီချက်ကို ဘယ်သူတွေက တာဝန်ခံ လက်မှတ်ရေးထိုးမှာလဲ။ နိုင်ငံတကာ အသိသက်သေအဖြစ် ဘယ်သူတွေကို ဖိတ်ကြားမှာလဲဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယအချက်ကတော့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းရေးကိစ္စများ Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR) ကို ဆွေးနွေးခွင့် မရသေးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
DDR နဲ့ SSR ဘာကွာသလဲ
ဒီသုံးချက်ထဲက အဓိကပြဿနာဟာ တတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ DDR ကိစ္စ ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ တပ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်က ဘီဘီစီ အင်တာဗျူးအတွင်း ဒီကိစ္စကို အရိပ်အမြွက် ပြောသွားပေမယ့် အသေးစိတ်ရှင်းပြသွားခြင်း မရှိပါ။ ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့က တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန အာရှရေးရာဌာန မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. Sun Guoxiang နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် DDR ကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေဘက်က လက်ခံဖို့ လိုတယ်လို့ တပ်ချုပ်က အသေအချာ ပြောခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီတရုတ်သံအမတ်ကြီးဟာ ဇွန်လ ၂ ရက်ကနေ ၉ ရက်နေ့အထိ KNU ဌာနချုပ် လော်ခီးလာစခန်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များရဲ့ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆီ တက်ခဲ့သူပါ။ အဲဒီကအပြန် နေပြည်တော်မှာ တပ်ချုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက အခုလို ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် DDR ကိစ္စ အမြန်ဆုံးဖြစ်လာဖို့ တပ်မတော်ဘက်က လိုလားနေတယ်ဆိုတာ သံသယရှိစရာ မလိုပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စကို နိုင်ငံတကာ သံတမန်တွေ၊ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်မှာသာ ပြောဆိုပြီး ပြည်တွင်းမီဒီယာနဲ့ အပစ်ရပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ဘာကြောင့် အကျယ်တဝင့် မဆွေးနွေးကြသေးတာလဲ ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။ အချိန်စောသေးလို့ မပြောကြသေးတာလား။ ဒီကိစ္စ ပြောလိုက်တာနဲ့ လက်ရှိရထားတဲ့ သဘောတူညီမှုတွေကနေ ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ဘဲ ဖြစ်သွားမှာ စိုးလို့လား။
DDR ကို လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းရေးကိစ္စလို့ တပ်ချုပ်က အလွယ်ပြောသွားပေမယ့် တကယ်တော့ ဒီစကားလုံးဟာ အတော်အဓိပ္ပာယ် ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ Disarmament လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေး၊ Demobilization စစ်မှုထမ်းအဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရေးနှင့် Reintegration သာမန်အရပ်သားများ အဖြစ် ပြန်လည် ပေါင်းစည်းနေထိုင်ရေးလို့ အကြမ်းဖျင်း အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေက ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးရာကနေ ဒီလုပ်ငန်းစဉ် DDR ဆိုတာ ပေါ်လာတာပါ။ ဒါပေမဲ့ မေးစရာ ကျန်နေတာကတော့ အဲဒီသုံးချက်ကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေဘက်ကချည်း လုပ်ရမှာလား။ တပ်မတော်ဘက်မှာကော ဒါမျိုးလုပ်ဖို့ မလိုဘူးလား ဆိုတာပါပဲ။ အခုအချိန်ထိ ကြားနေရသလောက်ကတော့ DDR ကို တိုင်းရင်းသားတပ်တွေဖက်က လက်ခံဖို့လိုတယ် ဆိုတာချည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်။ လော်ခီးလာမှာ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် တချို့ကဆိုရင် DDR ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုတောင် လက်မခံဘဲ SSR (Security Sector Reform) လုံခြုံရေးကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတဲ့ တခြားစင်ပြိုင်စကားလုံး အသစ်ကိုသုံးဖို့ တင်ပြထားတယ ဆိုပါတယ်။ ဒီစကားလုံးနှစ်ခုဟာ အဓိပ္ပာယ် တူသလိုလိုနဲ့ အနှစ်သာရချင်း မတူပါဘူး။
DDR က အစိုးရတပ်မှအပ တခြားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေ အားလုံး လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးလို့ အတော်များများက နားလည်ထားကြပါတယ်။ SSR ကတော့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေနဲ့အညီ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ တပ်တွေအားလုံးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ရေး၊ ပြန်လည်စုဖွဲ့ရေးလို့ အများက နားလည်ထားကြပါတယ်။
ဆိုလိုတာက အစိုးရတပ်ရော၊ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ တပ်တွေရော ရှိသမျှ လက်နက်ကိုင်တပ် အားလုံးကို ပြန်လည်ပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်းရေး၊ ရဲ၊ ပြည်သူ့စစ်၊ ထောက်လှမ်းရေး၊ ပြည်ထဲရေး၊ နယ်စပ်ရေးရာ စသဖြင့် လုံခြုံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ တပ်တွေ၊ ဝန်ကြီးဌာနတွေ အားလုံးကို ပြုပြင်ပေါင်းစပ် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
လက်ရှိအစိုးရတပ်၊ ထောက်လှမ်းရေးတပ်၊ ရဲတပ်၊ ပြည်သူ့စစ်တပ် စတဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ စံချိန်စံညွှန်းတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီတပ်တွေကို ဒီတိုင်းဆက်ထားလို့ မဖြစ်ဘူး။ ပြန်လည်စုဖွဲ့မှု လုပ်နိုင်မှ အသစ်တက်လာမယ့် အရပ်သားအစိုးရ၊ ဒီမိုကရေစီ အခင်းအကျင်းနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသူတိုင်း သိပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်တွေရဲ့ စံချိန်စံညွှန်းတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ပြုပြင်စရာတွေ အများကြီးပါ။ အဲဒီဒေသတွေဆီ ရောက်ဖူးတဲ့ MPC ဝန်ထမ်းတွေ၊ တောခိုကျောင်းသားဟောင်းတွေ အသိဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် DDR အစား SSR လုပ်ရေးဟာ ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပိုကိုက်ညီလိမ့်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
တကယ်တော့ လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ အခြေအနေက DDR၊ SSR အဆင့်တွေဆီ ရောက်ဖို့ အဝေးကြီး လိုပါသေးတယ်။ တရုတ်နယ်စပ်ရှိ ကချင်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာရော၊ ထိုင်းနယ်စပ်ဖက်ရှိ ကရင်ပြည်နယ်ဖက်မှာပါ သေနတ်သံတွေ ကြားနေရဆဲပါ။ ဒီသေနတ်သံတွေ အားလုံးကို တိတ်အောင်လုပ်ပြီးမှ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်စာချုပ် NCA ကို လက်မှတ်ထိုးနိုင်မှာပါ။
တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လက်ထက်မှာ DDR၊ SSR ကိစ္စ ဆွေးနွေးရေး လုံးဝမဖြစ်နိုင်သေးပါ။ NCA စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးဖို့တောင် ဒီအစိုးရသက်တမ်းအတွင်း ဖြစ်မယ်လို့ ထင်နိုင်တဲ့ အချက်အလက် မတွေ့ရသေးပါ။ သြဂုတ်အတွင်း လွှတ်တော်အမတ်စာရင်းတွေ အပြီးတင်ရမှာမို့ ဝန်ကြီးအားလုံး၊ ပါတီအားလုံး ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ အလုပ်ရှုပ်ကြပြီမို့ အပစ်ရပ်ရေးဘက် လှည့်နိုင်မယ် မထင်တော့ပါ။
ဒါဖြင့် ငြိမ်း( ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးဆဲ/ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူထားသည့် အဖွဲ့) တွေက ရွေးကောက်ပွဲနဲ့မဆိုင်ဘဲ အရင်လိုပဲ ရှိနေဦးမှာလား။ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်တို့၊ ၂၀၁၀ တို့အပြင် ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်း ငြိမ်းနယ် (အဲဒီတုန်းကတော့ ငြိမ်းတွေအားလုံး အစိုးရတပ်နဲ့ အကြိတ်အနယ် တိုက်နေဆဲပါ) မှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့် မရခဲ့ပါ။ ငြိမ်းအဖွဲ့တွေ၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်း ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ထဲ ပါဝင်ခွင့် မရခဲ့ပါ။ အခု ၂၀၁၅ မှာတော့ ငြိမ်းနယ်မှာ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်တယ်လို့ ကြားရပေမယ့် အဲဒီနယ်ထဲအထိ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လုပ်မယ်လို့ ကြေညာတာမျိုးတော့ မကြားမိသေးပါ။
ပန်ဆန်းအပါအဝင် “ဝ” နယ်က ခြောက်မြို့နယ်၊ မိုင်းလားအပါအဝင် ရှမ်းမြောက်က နယ်မြေတချို့မှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့် မရတာ သေချာပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ KIA မြို့တော် လိုင်ဇာ၊ SSA ဌာနချုပ် လွိုင်တိုင်လျန်၊ KNU ဌာနချုပ် လော်ခီးလာ အပါအဝင် တခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နယ်မြေမှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်မယ်လို့ မထင်ပါ။
ဒါဖြင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ငြိမ်းအဖွဲ့တွေ ဘာမှမဆိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့ သဘောလား။ လက်ရှိသွားနေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ပါလီမန်လုပ်ငန်းစဉ်ထဲ ပါဝင်ခွင့်မရဘဲ ဘေးဖယ်ခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစု ဘယ်လောက်များများ ကျန်နေဆဲလဲ။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအထိ ဒါမျိုးဆက်ဖြစ်နေဦးမှာလား။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဟန်ချက်ညီသွားဖို့ လိုတယ်လို့ ယုံကြည်သူတိုင်းက NCA, DDR, SSR ကိစ္စတွေကို အဖြေတစ်ခု ထွက်တဲ့အထိ ဆွေးနွေးနိုင်အောင် ကြိုတင်စဉ်းစား ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်နေပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
- See more at: http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/7747-atp#sthash.21IT12SA.dpuf
(22. Juli-senteret) ၄ နှစ်မြောက် ပြတုိုက်မှ ပုံတချို့
22-July Center (22. Juli-senteret) ၄ နှစ်မြောက် ပြတုိုက်မှ ပုံတချို့ မျှဝေလုိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီမှာ အများပြည်သူကြည့်နုိုင်ဖို့ ပြတုိုက်ဖွင့်ပေးတဲ့အတွက် ၀င်ရောက်လေ့လာဖြစ် ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ ဇူလုိုင် ၂၂ ဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလုိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့ကဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့ လူ ၈၀ နိးပါး အစုအပြုံ လုိုက် သတ်ဖြတ်ခံရမှု ၄ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်စဉ် အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်း အနားကျင်းပနေကြဖြစ်ပေမဲ့ ဒီနှစ်မှာတော့ ထူးထူးခြာခြား အောက်မေ့ဘွယ်ပြတုိုက်ပါ ဖွင့်မှာတဲ့။
ဖွင့်မဲ့နေရာက ဗုံးခွဲတုိုက်ခုိုက်ခံရမှုကြောင့် ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ရုံး၊ အစိုးရရုံး (ဟောင်း) အဆောက်ဦမှာ။ အစိုးရဆုိုလုို့ နေပြည်တော်လုို လူတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာ သံတတုိုင်းကာပြီး ဆောက်ထားတယ်လုို့ မထင်လုိုက်ပါနဲ့။ အော်စလုို မြို့လယ်ခေါင်တည့်တည့် ကားလမ်းဘေးမှာ ဘာအကာ အရံမှ မရှိပါ။
မနက်ပုိုင်းတုန်းက လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်အပါဝင် နုိုင်ငံရေးသမားတွေက အဲဒီရုံးရှေ့မှာ အောက်မေ့ ဘွယ်တရားဝင်အခန်းအနားကျင်းပပြီး အများပြည်သူအတွက်တော့ နေ့လည် ၂ နာရီမှ ဖွင့်ပေး မယ်လို့ TV က ကြေညာပါတယ်။
အဲဒီရုံးရှေ့ ကျနော်ရောက်သွားတော့ တနာရီခွဲပဲရှိသေးတယ်။ လူ ၅၀ လောက် တန်းစီစောင့်နေ ပြီ။ ဇူလုိုင် ၂၂ ဟာ နော်ဝေးရဲ့နွေလယ်ရာသီဆုိုပေမဲ့ မပြောမဆုို မုိုးရွာချလုိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတွေကနောက်ဆုတ်မသွားကြပါဘူး။ တဖြေးဖြေးနဲ့ ပုိုများလာပါတယ်။ ၂ နာရီ ပြတုိုက်စဖွင့် ချိန်မှာ တန်းစီလူ ၂၀၀ လောက်အထိ ရှိလာပါတယ်။
ပြတုိုက်ဆုိုလုို့ တခြား အနုပညာပြတုိုက်တွေလုိုမျီုး အသေချာပြင်ဆင်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပါ။ ဗုံးခွဲ ခံရတဲ့ (အထပ် ၂၀ လောက်ရှိမယ်ထင်ပါရဲ့) ရုံးရဲ့ လုံခြုံ့ရေးအခန်းတွင်းက အပျက်အစီးတွေ ကြားမှာ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေကိုပြသထားတာပါ။
နေရာကကျင်းပြီး ၀င်ကြည့်မဲ့သူကများတော့ တကြိမ်မှာ ၁၅ ဦးစီလောက်ပဲ ၀င်ခွင့်ပေးပါတယ်။ တနာရီကျော်ကြည့်ပြီး ပြန်ထွက်လာတဲ့အထိ အပြင်မှာစောင့်နေသူက တရာကျော်လောက်ရှိ နေဆဲ။
ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယုိုမှတ်တမ်းတွေအပြင် အဲဒီနေ့က လူသတ်သမားသုံးသွားတဲ့ (ဗုံးခွဲတဲ့) ကားအပျက်အစီးတွေကို ပြတုိုက်အလယ်မှာပြသထားပါတယ်။ ပြီးတော့ Utøya ကျွန်းမှာ အသတ်ခံရတဲ့ လူငယ်လေးတွေဆီက ကျန်ခဲ့တဲ့ လက်ကုိုင်ဖုန်းတွေ၊ ကင်မရာတွေကုို ပြသထား ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖုို့အကောင်းဆုံးကတော့ လူသတ်သမား Anders Behring Breivik ရဲ့ ရဲအတုမှတ်ပုံကပ်ပြားပါပဲ။
ရဲဝတ်စုံဝတ်၊ ဗင်ကားတစီးကိုမောင်း၊ အစိုးရရုံးဘေးနားမှာ ကားရပ်ပြီး (အချိန်ကိုက်ဗုံးလုို့ ယူဆရ) ၂၂ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီဝန်းကျင်မှာ အော်စလုိုမြို့လယ်က အစုိုးရရုံးကုို ဗုံးခွဲ တုိုက်ခုိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုိုက်ခုိုက်မှုအတွင်း လူ ၈ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလုို ဗုံးကွဲမှုကြောင့် ရဲတွေအားလုံး အလုပ်ရှုပ်နေချိန်မှာ ခပ်တည်တည်နဲ့ နောက်ကားတစီးကုို Utøya ကျွန်းဆီ ဆက်မောင်းသွားပါတယ်။ အဲဒီကျွန်းမှာက အာဏာရ (အဲဒီအချိန်က) အလုပ်သ မားပါတီရဲ့ နုိုင်ငံတကာလူငယ်ပွဲတော်ကျင်းပနေတာပါ။ ကျွန်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ တွေ့ သမျှလူငယ်တွောအားလုံးကုို စက်သေနတ်နဲ့ပစ်တဲ့အတွက် ဆယ်ကျော်သက်လူငယ် ၇၉ ဦး ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
သူကုို ရဲကဖမ်းပြီး ထောင်ထဲထည့်ထားပေမဲ့ နော်ဝေးမှာ သေဒဏ်မရှိပါ။ ထောင်ဆုိုတာကလဲ မြန်မာနုိုင်ငံကထောင်တွေနဲ့စာရင် ဟုိုတယ်လိုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရမလားမသိပါ။ အကျဉ်းသား ရပုိုင်ခွင့်အားလုံးပေးထားတဲ့အပြင် တနေ့ကဆုိုရင် အော်စလုိုတက္ကသုိုလ်မှာ နုိုင်ငံရေးသိပ္ဗံဘာ သာရပ် သင်ကြားခွင့်တောင် ပေးလုိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။
အခုတော့ အဲဒီလူသတ်မှု ၄ နှစ်ပြည့်အဖြစ် အောက်မေ့ဘွယ်ပြတုိုက်ဖွင့်လုိုက်ပါပြီ။ ဒီအပေါ်မှာ ပြတုိုက်ထားသင့်သလား၊ မေ့ပစ်သင့်သလား စသဖြင့် နော်ဝေးလူထုကြား အပြန်အလှန် ငြင်းခုန် နေဆဲပါ။
စာဖတ်သူတွေကော ဘယ်လုိုထင်ကြပါသလဲ။ အမှတ်တရ ပြတုိုက်လုပ်ထားသင့်သလား။ မေ့ပစ်လုိုက်သင့်သလား...။ သင်္ခန်းစာယူစရာ ဘာတွေရှိမလဲ...။ ။
1:43 AM Htet Aung Kyaw No comments
Tour de France ၁၇ ရက်မြောက်နေ့ Simon Geschke အနုိုင်ရ။
ပြင်သစ်နုိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ၂၁ ရက်ကြာ ကမ္ဘာ့နာမည်အကြီးဆုံး ပရုိုဖက် ရှင်နယ် စက်ဘီးပြိုင်ပွဲ Tour de France ၁၇ ရက်မြောက်နေ့မှာ Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin က 4:12:17 နာရီနဲ့ တကုိုယ်တော် ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Andrew Talansky (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team က 0:00:32 စက္ကန့်နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step က 0:01:01 မီနစ်နောက်ကျပြီး တတိယ ရပါ
GC အ၀ါရောင်အကျီကတော့ အပြောင်းအလဲမရှိပဲ Christopher Froome က ပဲ ဆက်ထိမ်း ထားပါတယ်။
(Breakaway အုပ်စု ဘာကြောင့် ပြတ်အောင်မပြေးနုိုင်သလဲ...)
တတိယ သတင်းပတ်ရဲ့ပွဲစဉ်အစ Digne-les-Bains ကနေ Pra-Loup အထိ 161 km ကီလုိုမီတာပြိုင်ပွဲတလျောက် ရာသီဥတုက တာထွက်ချိန်မှာ ၃၃ အထိပူပြိး ပန်းဝင်ချိန်မှာ ၂၂ ပဲရှိပါတယ်။ ထုံးစံအတုိုင်း တာထွက်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာကတည်းက အစိမ်းရောင်အကျီပုိုင်ရှင် ပီတာဆာဂန်အပါဝင် ၂၇ ဦးပါ Breakaway အဖြစ် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။ ပထမ ပုိုင်းမှာ ၄ မီနစ်လောက်ပြတ်နေရာကနေ တဖြေးဖြေးနဲ့ ၁၂ မီနစ်လောက်အထိ Peloton ကုို ဖြတ်ထားနုိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အချင်းချင်းဟန်ချက်ညီ မစီးနုိုင်တဲ့အတွက် အရှိန်က အရင်နေ့တွေကလောက် ပြတ် မသွားခဲ့ပါ။ ပန်းဝင်ဖုို့ ကီလုို ၄၀ အလိုဝန်းကျင်မှာတော့ အခု ပထမ ရသွားတဲ့ Simon Geschke တကုိုယ်တော် ထွက်ပြေးပါတယ်။ သူလုိုက်မလုိုလုို ကုိုယ်လုိုက်မလုိုလုိုနဲ့ ဘယ်သူ မှအသေချာမလုိုက်ပဲနဲ့ စက္ကန့် ၃၀ ခန့်အထိ ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပုိုင်းမှာ တချို့က အသဲအသန်လုိုက်ပေမဲ့ Sagan အပါဝင်တချို့ကကျန်ခဲ့ပြီး Peloton နဲ့ ပြန်ပေါင်းလုိုက်ပါတယ်။
GC အ၀ါရောင်အကျီအတွက် အသဲအသန်ပြိုင်နေကြတဲ့ အဓိကပြိုင်ဖက်တွေထဲက Christopher Froome ရဲ့နောက်မှာ ၃ မီနစ်ခွဲပြတ်ပြီး တတိယ နေရာကနေ ကပ်လုိုက်နေတဲ့ BMC အသင်းခေါင်းဆောင် Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team ဒီနေ့ ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်။
သူဟာ ပွဲစဉ် ၁၃ တုန်းကကြုံခဲ့ရတဲ့ အအေးဒဏ်ကြောင့်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်လုို့ဆုိုပါ တယ်။ မနေ့ကနားရက်မှာကောင်းကောင်းနားပြီး ဒီနေ့ရက်ဒီဖြစ်မယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့ ကီလုို ၅၀ ၀န်းကျင် တောင်အတက်မှာ ကြွက်သားတွေအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလုို့သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာမှမတတ်နုိုင်ပဲ ပြိုင်ပွဲကုိုစွန့်လုိုက်ရပါတယ်။ တကယ်နှမျောဖုို့ကောင်းပါတယ်။
ဒုတိယ ဒုက္ခကတော့ နံပတ်5နေရာကနေ 0:04:23 မီနစ်ပြတ်ပြီး ကပ်လုိုက်နေတဲ့ Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo ချော်လဲခြင်းပါ။ ပန်းဝင်ဖုို့ ၁၀ ကီလုိုဝန်းကျင်အလို နောက် ဆုံးတောင်မတက်ခင် အရင်တောင်အဆင်းမှာ ချော်လဲတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ TV က လဲတဲ့ ပုံမရပဲ စက်ဘီးပျက်နေတဲ့ပုံနဲ့ ဘောင်းဘီစုတ်ပြဲနေတဲ့ပုံတွေကိုသာတွေ့ရပါတယ်။
ဒီလုိုချော်လဲပြီး စက်ဘီးပြန်ပြင်နေစဉ် ကျန် အ၀ါရောင်အုပ်စု အဓိကပြိုင်ဖက်အားလုံးက ထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ ဒီလုိုနဲ့ နောက်ဆုံးပန်းဝင်တော့ Christopher Froome ထက် ၂ မီနစ် နောက်ကျသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် နံပတ် ၃ နေရာက Tejay Van Garderen ထွက်သွားလုို့ သူဟာ နံပတ် ၄ ကိုရောက်လာရမဲ့အစား ၂ မီနစ်နောက်ကျပြီး (၆-၄၀ မီနစ်) နံပတ် ၅ ပဲ ပြန် ဖြစ်သွားပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆုိုရင်တော့ မေလတုန်းက အီတလီမှာ ရထားတဲ့ Giro d’Italia- ပန်းရောင်အကျီရော၊ Tour de France ကရမဲ့ အ၀ါရောင်အကျီရော တနှစ်အတွင်း ထိပ်တန်း ဆု ၂ ခု double ရဖုို့ဆုိုတဲ့ အိပ်မက် ပျက်ပျယ်စပြုသွားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။
(အ၀ါ၊ အစိမ်း၊ အဖြူ။ ကွက်ကြား..)
၁၇ ရက်အပြီး GC အမှတ်အများဆုံး အ၀ါရောင်အကျီပုိုင်ရှင်အဖြစ် Christopher Froome (GBr) Team Sky၊ အစိမ်းရောင်အကျီ Point အများဆုံးအဖြစ် Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo၊ အဖြူရောင်လူငယ်ခြေတက်ပုိုင်ရှင်အဖြစ် Nairo Quintana (Col) Movistar Team နဲ့ ဖြူ-နီ-ကျား တောင်တက်ဘုရင်အဖြစ် Christopher Froome (GBr) Team Sky တုို့က ရထားပါတယ်။
၁၇ ရက်တာအပြီး သုို့မဟုတ် ပန်းဝင်ဖုို့ ၄ ရက်အလိုအထိ GC ၁-၁၀ ရထားသူတွေကတော့..
10 Warren Barguil (Fra) Team Giant-Alpecin 0:13:08 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Gap ကနေ Saint-Jean-de-Maurienne အထိ 186.5 km ကီလုိုမီတာ ကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပေ ၃၀၀၀၊ ၄၀၀၀ နဲ့ ၆၀၀၀ ကျော်အထိပါတဲ့ တောင် ၃ လုံးအပါဝင် တနေကုန်တောင်တွေတက်ရမှာမုို့ Sprinter တွေအတွက်တော့ သိပ် မျော်လင့်ချက်မရှိတော့ပါ။ GC သမားတွေ၊ အခုချိန်ထိ ခြေမပေါ်သေးတဲ့ ရွက်ပုံးသိးတောင် တက်သမားတွေထဲက ဘယ်သူရမလဲဆုိုတာ မနက်ဖြန်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
Tour de France ၁၈ ရက်မြောက်နေ့ Romain Bardet ဒု-အကြိမ် အနုိုင်ရ။
ပြင်သစ်နုိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ၂၁ ရက်ကြာ ကမ္ဘာ့နာမည်အကြီးဆုံး ပရုိုဖက် ရှင်နယ် စက်ဘီးပြိုင်ပွဲ Tour de France ၁၈ ရက်မြောက်နေ့မှာ Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale က 5:03:40 နာရီနဲ့ တကုိုယ်တော် ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Pierre Rolland (Fra) Team Europcar က 0:00:33 စက္ကန့်နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ Winner Anacona (Col) Movistar Team က 0:00:59 စက္ကန့်နောက်ကျပြီး တတိယ ရပါတယ်။
GC ၁၈ ရက်ပေါင်း အမှတ်အများဆုံး အ၀ါရောင်အကျီကတော့ အပြောင်း အလဲမရှိပဲ Christopher Froome က ပဲ ဆက်ထိမ်း ထားပါတယ်။
Gap ကနေ Saint-Jean-de-Maurienne အထိ 186.5 km ကီလုိုမီတာပြိုင်ပွဲအတွင်း ပေ ၆၀၀၀ ကျော်မြင့်တဲ့တောင်အပါဝင် တောင် ၆ လုံးပါတဲ့အတွက် ဒီနေ့ပွဲဟာ ၂၁ ရက်တာ အတွင်း တောင်အများဆုံးပွဲဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲဟာ မနေ့ကလုို့ပဲ တာထွက်ပြီး သိပ်မကြာခင်ကတည်းက ၂၉ ဦးပါ Breakaway တခု ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။ မနေ့ကလုို Peloton ကုို ၁၀ မီနစ်အထိ မဖြတ်နုိုင်ပဲ ၃ မီနစ်ကျော်သာဖြတ်နုိုင်ပေမဲ့ အဲဒီမီနစ်ကုို ပန်းဝင်တဲ့အထိ ထိမ်းထားနုိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၀၇ ကီလုိုမီတာရှိ Sprint ဆွဲတဲ့နေရာကနေစပြီး ၂၉ ဦးဟာ စတင်ကွဲပြဲပါတယ်။ အခု ပ-ဒု-တ ရသူတွေအပါဝင် လူ ၁၀ ဦးလောက်ပဲ ပထမ အုပ်စုမှာကျန်ပြီး ကျန်လူတွေ တဖြေးဖြေး ပြတ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ အခု ပထမ ရတဲ့ Bardet နဲ့အတူ Fuglsang က ဦးဆောင်စီးနင်းနေစဉ် နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တုန်း Fuglsang ချော်လဲသွားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြိး Bardet တကို်ယ်တော် စပြေးတာ ပန်းဝင်တဲ့အထိပါပဲ။
အ၀ါရောင်အုပ်စုအတွင်း ပထမ ဆုံးနဲ့ အသိသာဆုံးတုိုက်ခုိုက်သူကတော့ နံပတ် ၅ နေရာ ကနေလုိုက်နေတဲ့၊ မနေ့ကပွဲမှာချော်လဲလုို့ ၂ မီနစ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo ပါပဲ။ ပန်းဝင်ဖုို့ ကီလုို ၄၀ ၀န်းကျင်အလို အမြင့်ဆုံးတောင်အတက်မှာ သူက အခုလို တုိုက်ခုိုက်တာဖြစ်ပြီး ၄၅ စက္ကန့်အထိပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
အ၀ါရောင်အကျီပုိုင်ရှင် ဖရုိုးနဲ့ စကုိုင်းအသင်းသားတွေ ရုတ်တရက်အငုိုက်မိပြီး ချက်ချင်း မလုိုက်နုိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကွန်တာဒါဟာ ရှေ့ပြေး-နောက်ကျန် ၄ ဦးအုပ်စုနဲ့ သွားပေါင်း မိသွားပါတယ်။ တမီနစ်နီးပါး ပြတ်သွားတဲ့အတွက် ကွန်တာဒါ လွတ်သွားပြီလုို့ ထင်ခဲ့မိပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် မလွတ်ပါ။ နောက်ဆုံး ၁၂ နှစ်ထွေ တောင်အတက်မှာ အ၀ါရောင်အုပ်စု က ပြန်မိသွားပါတယ်။
(၁၂ ထွေတောင်နဲ့ သဘာဝရှုခင်းများ...)
ဒီနေ့ဖြတ်ခဲ့သမျှ တောင်တွေထဲမှာ စ်ိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံး၊ ဒါမှမဟုတ် ကြည့်လုို့ အကောင်းဆုံးတောင်ကတော့ နောက်ဆုံးတက်ရတဲ့ ၁၂ ထွေ တောင်တန်းပါပဲ။ ကျိုက်မ ရောက ၇ နှစ်ထွေတုို့၊ မေမြို့က ၃ ထပ်တုို့နဲ့စာရင် တကယ့် အကွေ့အကောက် တောင်တက် လမ်းကြမ်းပါ။
အဲဒီမရောက်ခင် ရှေ့ပုိုင်းကအမြင့်ဆုံးတောင်တွေဟာ ဘယ်လောက်အထိမြင့်သလဲဆုိုရင် တိမ်တွေက တောင်ခါးပန်းရောက်နေပါတယ်။ တိမ်ပေါ်မှာ တောင်ထိပ်ကုိုမြင်နေရပြီး တချို့ တောင်ထိပ်တွေမှာ အခုနွေလယ်ရာသီအထိ ရေခဲတွေရှိနေတုန်းပါ။
(၁၈ ရက်အပြီး သုို့မဟုတ် ပန်းဝင်ဖုို့ ၃ ရက်အလို GC ၁-၁၀ ရထားသူများ)
10 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:12:52 တို့ဖြစ်ပါတယ်။
(စက်ဘီးထဲ မော်တာ ထည့်ထားသလား...)
ဒီနေ့ပွဲစဉ်အပြီး ထူးထူးခြားခြားထွက်လာတဲ့သတင်းတပုဒ်ကတော့ အ၀ါရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Christopher Froome (GBr) Team Sky ရဲ့ စက်ဘီးအပါဝင် ထိပ်တန်းစက်ဘီးသမား ၆ ဦး ရဲ့ စက်ဘီးတွေကို UCI နည်းပညာအဖွဲ့က စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
အခြား ၅ ဦးကတော့ ဒီနေ့ပထမရတဲ့ Romain Bardet (Ag2r-La Mondiale), အစိမ်းရောင် အကျီပုိုင်ရှင် Peter Sagan (Tinkoff-Saxo), အ၀ါရောင်အတွက် ဒုတိယ နေရာက ကပ် လုိုက်နေသူ အဖြူရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Nairo Quintana (Movistar), Joaquim Rodriguez (Katusha) နဲ့ Pierre Rolland (Europcar) တုို့ စက်ဘိးတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကုိုအဓိကစစ်သလဲဆုိုတော့ ဒီလူတွေ ဒီလောက်ကောင်းနေတာ စက်ဘီးထဲ လျှို့ဝက် မော်တာ တပ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်မယ်ဆုိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကြောင့်ပါ။ ဒါဟာ ရယ်စရာလုိုလုို ထင်ရပေမဲ့ ဒီလုိုစွပ်စွဲချက် မကြာခဏထွက်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလက အီတလီမှာ ကျင်းပတဲ့ Giro d’Italia ပွဲတုန်းကလည်း ပန်းရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo ရဲ့ စက်ဘီးကို ဒီလုိုပဲ စစ်ဆေးခဲ့ပါသေးတယ်။
(မနက်ဖြန်ပွဲ ဘယ်သူ အနုိုင်ရမလဲ...)
မနက်ဖြန်မှာတော့ Saint-Jean-de-Maurienne ကနေ La Toussuire - Les Sybelles အထိ 138 km ကီလုိုမီတာကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပေ ၇၀၀၀ နီးပါး တလုံး၊ ၅၀၀၀ နီးပါး ၃ လုံးအပါဝင် တနေကုန် တောင်တက်ရမှာမုို့ ဒီနေ့လုိုပဲ တာတုိုသမားတွေ အ တွက်မရှိပါ။ တောင်တက်ဘုရင်တွေ၊ အထူးသဖြင့် အ၀ါရောင်အုပ်စုထဲက ၃ မီနစ် ၄ မီနစ် ပြတ်နေသူတွေ မနက်ဖြန်မှာ နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးအဖြစ် လက်ရှိအ၀ါရောင်ပုိုင်ရှင် Christopher Froome (GBr) Team Sky ကုို တတ်နုိုင်သမျှ ဖြတ်နုိုင်အောင် ကြိုးစားလိမ့် မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ။
Tour de France ၁၉ ရက်မြောက်နေ့ Nibali အနုိုင်ရ။
ပြင်သစ်နုိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ၂၁ ရက်ကြာ ကမ္ဘာ့နာမည်အကြီးဆုံး ပရုိုဖက် ရှင်နယ် စက်ဘီးပြိုင်ပွဲ Tour de France ၁၉ ရက်မြောက်နေ့မှာ ၂၀၁၄ ချန်ပီ ယံ Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team က 4:22:53 နာရီနဲ့ တကုိုယ် တော် ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ အ၀ါရောင်အကျီအတွက် ဒုတိယ နေရာက ကပ်လုိုက်နေ သူ Nairo Quintana (Col) Movistar Team က 0:00:44 စက္ကန့်နောက်ကျ ပြိး ဒုတိယ ရပါတယ်။
လက်ရှိအ၀ါရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Christopher Froome (GBr) Team Sky က 0:01:14 မီနစ်နောက်ကျပြီး တတိယ ရပါတယ်။ ဒီနေပွဲဟာ အကြိတ်အနယ်ရှိ လှပေမဲ့ အ၀ါရောင်အကျီကိုတော့ Froome ကပဲ 0:02:38 မီနစ်အသာနဲ့ ထိမ်း ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။
(Breakaway အဖွဲ့ ပြန်ဖမ်းမိခြင်း...)
Saint-Jean-de-Maurienne ကနေ La Toussuire - Les Sybelles အထိ 138 km ကီလုိုမီတာ ပြိုင်ပွဲဟာ တောင်တက် သက်သက်လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် တာတုိုသမားတွေ အခြေနေမကောင်းပါ။ ဒါပေမယ့် ၂၁ ဦးပါ Breakaway တခု တာထွက်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာ ကတည်းက ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။
၄ မီနစ်နီးပါးအထိ Peloton ကုိုဖြတ်ထားနုိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ပန်းဝင်တဲ့အထိ အဲဒီလုို ထိမ်းမထားနုိုင်ခဲ့ ပါ။ ဒါပေမဲ့ Breakaway ၂၁ ဦးထဲက နောက်ဆုံးလက်ကျန်ဖြစ်တဲ့ Pierre Rolland (Europcar) ဟာ ပန်းဝင်ဖုို့ ၁၅ ကီလုိုလောက်အထိ သုို့မဟုတ် ဒီနေ့ ပထမ ရသွားတဲ့ Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team သူ့ကုို မမိခင်အထိ ရှေ့ဆုံးကနေ ဦးဆောင် နုိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲဟာ တာထွက်ကတည်းက တောင်တက်ရတာမုို့ ပထမ တောင်မှာတင် အ၀ါရောင် အုပ်စုအတွင်း တုိုက်ခုိုက်မှုအတော်များများဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကံဆုိုးချင်တော့ အ၀ါရောင်အကျီ ပုိုင်ရှင် Froome ရဲ့ အဓိက အသင်းဖေါ်လဲဖြစ်၊ GC နံပတ် ၄ နေရာကနေလုိုက်နေသူလဲဖြစ်တဲ့ Geraint Thomas ပြတ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
ပေ ၆၀၀၀ ကျော်မြင့်တဲ့ ဒုတိယတောင်ကုိုတက်နေစဉ် Christopher Froome ရဲ့ စက်ဘီး ဟာ ကျောက်လုံးတခုနဲ့တုိုက်မိပြီး ချိန်းကြိုးကျသွားတယ်လုို့ယူဆရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ တုိုက်တုိုက်ဆုိုင်ဆုိုင် အခု ပထမ ရသွားတဲ့ Nibali က ၂ ကြိမ်တိတိ အသေချာလှည့်ကြည့် ပြီး တကိုယ်တော်အရှိန်တင်ထွက်ပြေးပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ဟာ ပန်းဝင်ဖုို့ ၆၂ ကီလုိုတောင်လုို သေးတဲ့အတွက် အလွန်စွန့်စားတဲ့ ထွက်ပြေးမှုအဖြစ် အကဲခတ်တွေကဆုိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Froome ကတော့ သူဒုက္ခရောက်နေစဉ်မှာ Nibali ဒီလုိုထွက်ပြေးတာဟာ အားကစားသမားကောင်းမပီသဘူးလုို့ ဝေဖန်ပါတယ်။ နီဘာလီကတော့ ဖရူး ဒုက္ခရောက် နေချိန်မှာတမင်ထွက်ပြေးတာ မဟုတ်ရပါဘူးလုို့ငြင်းဆုိုခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၈ ရက်တာလုံးလုံး နောက်မှာချည်းကျန်နေလုို့ ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ၂၀၁၄ ချန်ပီယံ Vincenzo Nibali ဟာ ဒီနေ့မှာတော့ အံ့သြလောက်ဘွယ်ခြေကောင်းနေပါတယ်။ ပြီးတော့ ကံလည်းကောင်းတယ်ပြောရမှာပါ။ သူ စပြေးချိန်မှာ ဖရုိုး ဒုက္ခများနေတဲ့အပြင် တခြားလူတွေ ကလည်း သူကုိုမိအောင် ပြန်မဖမ်းကြပါဘူး။
ဒီလုိုနဲ့တဖြေးဖြေးအရှိန်ရလာပြီး ရှေ့ကပြေးနေတဲ့ ၂၁ ဦးပါ Breakaway ထဲက လက်ကျန်လူ အတော်များများကို ကျော်ဖြတ်လာနုိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ရှေ့မှာ တဦးတည်း ဦးဆောင်နေသူ Pierre Rolland (Europcar) ကုိုပါ နီဘာလီက မိသွားပါတယ်။ အဲဒီအချိန် မှာ သူနဲ့ အ၀ါရောင်အုပ်စုကြား Gap က ၂ မီနစ်ခွဲနီးပါးအထိ ရှိနေခဲ့ပါပြီ။
ပန်းဝင်ဖုို့ ၅ ကီလုိုအလိုမှာတော့ အ၀ါရောင်အုပ်စုတွင်း ဒုတိယနေရာကလုိုက်နေသူ Nairo Quintana (Col) Movistar Team က အသားကုန်စတင်တုိုက်ခုိုက်ပါတယ်။ Christopher Froome နဲ့ Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team၊ Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo တုို့ ချက်ချင်းထလုိုက်ပေမဲ့ မမီတော့ပါ။
ပုိုဆုိုးတာက Valverde နဲ့ Contador တုို့ဟာ ဖရုိုးနဲ့ပေါင်းပြီး ဆက်မလုိုက်ပဲ နောက်မှာ ကျန် ခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ပြန်ပေါင်းလုိုက်ပါတယ်။ ဖရုိုးအသဲအသန်လုိုက်ပေမဲ့ ကုိုလံဘီယာ လူပုလေး ကင်တားနားရဲ့ အရှိန်က သိပ်ကောင်းနေတဲ့အတွက် တဖြေးဖြေးနဲ့ပြတ်ပြီး ပန်းဝင်ချိန်မှာ စက္ကန့် ၃၀ အထိ ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့တာထွက်စဉ်က GC ဇယားနဲ့ အခု ပွဲအပြီး ဇယားအတော်ပြောင်းသွားခဲ့ပါ တယ်။ တာထွက်စဉ်က နံပတ် ၄ နေရာမှာရှိနေခဲ့သူ Geraint Thomas နံပတ် ၁၅ အထိ လျော့ကျသွားပါတယ်။ တခါ ပထမ ရတဲ့ Nibali က နံပတ် ၇ ကနေ ၄ နေရာအထိတက်လာ ခဲ့ပါတယ်။
(၁၉ ရက်အပြီး သုို့မဟုတ် ပန်းဝင်ဖုို့ ၂ ရက်အလို ၁-၁၀ ရထားသူစာရင်း)
General classification after stage 19# Rider Name (Country) Team Result
1 Christopher Froome (GBr) Team Sky 78:37:34
2 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:02:38
4 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 0:06:44
5 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 0:07:56
6 Robert Gesink (Ned) Team LottoNL-Jumbo 0:08:55
7 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 0:12:39
8 Bauke Mollema (Ned) Trek Factory Racing 0:13:22
9 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:14:08
10 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 0:17:27
မနက်ဖြန်မှာတော့ Modane Valfréjus ကနေ Alpe d'Huez အထိ 110.5 km ကီလုိုမီတာ ကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ဖြန်ပွဲဟာလည်း ဒီနေ့လုိုပဲ တောင်တက်သက် သက်ဖြစ်တဲ့အတွက် GC သမားတွေပဲ အကြိတ်အနယ်ပြိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းနုိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လက်ရှိ အ၀ါရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Christopher Froome ရဲ့နောက်မှာ ၂ မီနစ် ခွဲ ပြတ်နေသူ Quintana ခြေစွမ်းပြမဲ့နေ့လုို့ ဟောကိန်းထုတ်ချင်ပါတယ်။
တခါ ဒီနေ့ ပထမ ရသွားတဲ့ လက်ရှိချန်ပီယံ Vincenzo Nibali ဟာလဲ ဒီနေ့ခြေစွမ်းမျိုးကုိုသာ မနက်ဖြန်ဆက်ရမယ်ဆုိုရင် အ၀ါရောင်အကျိလုပွဲဟာ အခြေနေတမျိုးပြောင်းသွားနုိုင်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ စပိန်ကချန်ပီယံ Valverde နဲ့ Giro d’Italia ပန်းရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Contador တုို့ကုိုလည်း လျော့တွက်ထားလုို့ မဖြစ်ပါဘူး။
အစဉ်အလာအားဖြင့်ဆုိုရင်တော့ မနက်ဖြန်ပွဲဟာ GC အ၀ါရောင်အကျီ ဘယ်သူရမလဲဆုိုတာ ကို ဆုံးဖြတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။ နောက်ဆုံးနေ့ တနင်္ဂနွေမှာ ပဲရစ်ကိုဝင်ရင် GC သမားတွေ အကြိတ် အနယ်စီးလေ့မရှိတော့ပါ။ နောက်ဆုံးနေ့တာထွက်ကတည်းက လက်ရှိအ၀ါရောင်အကျီပုိုင် ရှင်က ရှန်ပိန်သောက်ပြီး ကြိုတင်အောင်ပွဲခံလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် မနက်ဖြန်ပွဲမှာ Quintana (Col)၊ Valverde (Spa)၊ Nibali (Ita) နဲ့ Contador (Spa) တုို့ Froome (GBr) ကုို ဘယ်လောက်အထိဖြိုနုိုင်မလဲ။ ၂ မီနစ် ၃ မီနစ်အထိ ဖြတ်နုိုင် မလားဆုိုတာဟာ အတော်စိတ်ဝင်စားဘွယ်ဖြစ်နေပါကြောင်း....။ ။
Tour de France ၂၀ ရက်မြောက်နေ့ Pinot အနုိုင်ရ။
ပြင်သစ်နုိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ၂၁ ရက်ကြာ ကမ္ဘာ့နာမည်အကြီးဆုံး ပရုိုဖက် ရှင်နယ် စက်ဘီးပြိုင်ပွဲ Tour de France ၂၀ ရက်မြောက်နေ့မှာ Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr က 3:17:21နာရီနဲ့ တကိုယ်တော် ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ GC ဒုတိယ နေရာမှ ကပ်လုိုကနေသူ Nairo Quintana (Col) Movistar Team က 0:00:18 နောက်ကျနဲ့ ဒုတိယ ရပါတယ်။ Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team က 0:00:41 စက္ကန့် နောက်ကျနဲ့ တတိယ ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ GC ပထမနေရာ အ၀ါရောင်အကျီကုိုတော့ အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် မလုပ်နုိုင်ခဲ့ကြ တဲ့အတွက် Christopher Froome ကပဲ ဆက်ထိမ်းထားဆဲဖြစ် ပါတယ်။
Modane Valfréjus ကနေ Alpe d'Huez အထိ 110.5 km ကီလုိုမီတာ ပြိုင်ပွဲတလျောက် ဟာ တောင်တက်သက်သက်ဖြစ်တဲ့အတွက် တာတုိုသမားတွေ ရှေ့မတက်နုိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တချို့ကတော့ တာလွှတ်ကတည်းက ထွက်ပြေးကြပါတယ်။ ၄ ဦး လောက်လွတ်သွားပေမဲ့ သိပ်မကြာခင်မှာ Peloton က ပြန်မိသွားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပေ ၆၀၀၀ ကျော်မြင့်တဲ့ ဒုတိယတောင်အတက်မှာတော့ အဲဒီ ၄ ဦးပါ Breakaway အဖွဲ့ဟာ ၇ မီနစ်နီးပါးအထိ Peloton ကုိုဖြတ်ထားနုိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီချိန်မှာ အ၀ါရောင် အုပ်စု နဲ့အတူ တဖွဲ့လုံးလုိုက်ပါနေတဲ့ကြားထဲက တုိုက်ခိုက်မှုတချို့ရှိပြီး ၁၀ ဦးခန့် ထွက်ပြေးလွတ် မြောက်သွားပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတုို့ဟာ ရှေ့ပြေး ၄ ဦးကိုမမိပဲ Peloton က ပြန်မိသွား ပြန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘယ်လုိုပဲဖြစ်ဖြစ် Breakaway ထဲမှ Geniez (Fdj) ဟာ ပန်းဝင်ဖုို့ ၁၀ ကီလုို ၀န်းကျင်အလုိုအထိအ၀ါရောင်အုပ်စုကို ၂ မီနစ်ခွဲပြတ်အောင် တကုိုယ်တော် စွမ်းဆောင်သွား ခဲ့တာကတော့ မှတ်တမ်းပါပဲ။
(သိပ်ကောင်း၊ ဒါပေမဲ့ သိပ်နောက်ကျသွားတဲ့ ကင်တားနား...)
ဒီနေ့စိတ်ဝင်စားဖုို့အကောင်းဆုံးစက်ဘီးသမားကတော့ GC အတွက် ၂ မီနစ်ခွဲနီးပါးပြတ်ပြီး ဒုတိယနေရာက ကပ်လုိုက်နေသူ ကုိုလံဘီယာလူပုလေး ကင်တားနားပါပဲ။ မနေ့က ကြိုတင် ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တဲ့အတုိုင်း ဒီနေ့ဟာ သူ့အတွက် အရေးကြီးဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ပါပဲ။
ဒါကြောင့် ပန်းဝင်ဖုို့ကီလုို ၆၀ ၀န်းကျင်အလိုမှာကတည်းက သူစတင်တုိုက်ခုိုက်တာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ ၀ုန်းကနဲထွက်ပြေးသွားတဲ့အရှိန်ကြောင့် ၁၅ စက္ကန့်လောက်အထိ ဖရူးကုိုဖြတ် ထားနုိုင်လုိုက်ပါတယ်။ တခါ ရှေ့မှာပြေးနေတဲ့ သူ့ရဲ့အသင်းဖေါ် Valverde နဲ့တွဲမိသွားတဲ့ အတွက် သူတုို့ ၂ ဦး လွတ်အောင်ပြေးနုိုင်လိမ့်မယ်လုို့ပဲ ကျနော်က ထင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘာအတွက်အချက်မှားသလဲ၊ တကယ်ပဲ မစီးနုိုင်လုို့လျော့လုိုက်တာလား၊ သိပ်မကွဲ ပြားပဲနဲ့ အရှိန်လျော့ချပြီး အ၀ါရောင်အုပ်စုနဲ့ပြန်ပေါင်းလုိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလုို လျော့လုိုက်တဲ့ အတွက် တကွဲတပြားစီဖြစ်နေတဲ့ စကုိုင်းအသင်း ပြန်လည်စုစည်းခွင့်ရတဲ့အပြင် နောက်မှာ ပြတ်ကျန်နေခဲ့တဲ့ Peloton တခုလုံး တစုတည်းတခါပြန်ဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်။
ကျနော်တဦးတည်းအမြင်ဆုိုရင်တော့ ဒါဟာ ကင်တားနားရဲ့ မဟာဗျုဟာအမှားပါပဲ။ ပန်းဝင် ချိန် နောက်ဆုံးတင်ပြေးတဲ့အချိန်တွေ့ရတဲ့ သူ့ခြေစွမ်းဟာ ဖရူးထက်အများကြီးသာပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီ ကီလုို ၆၀ အလိုဝန်းကျင်ကတည်းကသာ ဖရူးကိုပြတ်အောင်ဖြတ်ပြီး ပြေး နုိုင်မယ်ဆုိုရင် အခုရတဲ့ တမီနစ်ခွဲမကပဲ၂ မီနစ်ခွဲအထိပြတ်ပြီး အ၀ါရောင်အကျီတောင် ရသွား နုိုင်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
(Pinot ဘယ်လုို ပထမ ရသွားသလဲ...)
အ၀ါရောင်အုပ်စုအတွင် အဲဒီလုိုအကြိတ်အနယ်ပြိုင်နေစဉ်၊ ဒါမှမဟုတ် နာမည်ကြီးတွေ အချင်းချင်းစောင့်ကြည့်နေချိန်မှာ အခု ပထမ ရသွားတဲ့ Pinot နဲ့ ၄ ဦးပါအဖွဲ့တခုက အ၀ါ ရောင်အုပ်စုကိုကျော်ပြီး ရှေ့ကိုတက်လာပါတယ်။
ဒီအုပ်စုဟာ တဖြေးဖြေးနဲ့ ရှေ့မှာကျန်နေတဲ့ Breakaway လက်ကျန်တွေနဲ့ပေါင်းမိပြီး ၆-၇ ဦး အထိရှိလာပြီး အရှိန်ပိုကောင်းလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Geniez က ၂ မီနစ်ခွဲအထိဖြတ်ပြီး ရှေ့ မှာပြေးနေပြီး သူ့နောက်မှာလဲ အခြားတဦးက တမီနစ်ပြတ်နဲ့ကပ်လုိုက်နေတဲ့အတွက် သူတုို့ အုပ်စု အဲဒီရှေ့ပြေး ၂ ဦးကို မမီနုိုင်တော့ဘူးလုို့ ထင်ခဲ့မိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Pinot နဲ့ Pierre Rolland တုို့ ၂ ဦးပေါင်းလုိုက်ရင်းနဲ့ ပန်းဝင်ဖုို့ ၁၀ ကီလုိုဝန်းကျင် အလို နောက်ဆုံးတောင်အတက် တ၀က်ခရီးလောက်မှာ Geniez ကုို သူတုို့မိသွားပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူတို့ ၂ ဦး ပထမ ရဖုို့အကြိတ်အနယ်ယှဉ်ပြုိုင်ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ ကုိုလံဘီယာ လူပုလေး ကင်တားနားကလဲ နောက်ဆုံး အကြိတ်ကြိုးစားခြင်းအဖြစ် ပန်းဝင်ဖုို့ ၅ ကီလုိုဝန်းကျင်အလိုမှာ အသားကုန်တင်ပြီး အ၀ါရောင်အုပ်စုကနေ မလွတ်လွတ်အောင် ထွက်ပြေးနုိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖရုးအတော် ခြေကုန် လက်ပန်းကျနေတာကိုတွေ့ရပြီး သူ့ရဲ့အသင်းဖေါ် ၂ ဦးက ဦးဆောင်ခေါ်ယူတာကိုတောင် မနုိုင် တနုိုင်နဲ့ ပန်းဝင်စည်းရောက်တဲ့အထိ လုိုက်လာခဲ့ရပါတယ်။
(၂၀ ရက်နေ့အပြီး သုို့မဟုတ် ပန်းဝင်ဖုို့တရက်အလို ၁-၁၀ ရထားသူတွေ...)
10 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 0:17:30 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Sèvres - Grand Paris Seine Ouest ကနေ Paris Champs-Elysees အထိ 109.5 km ကီလုိုမီတာကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင် တယ်ဆုိုပေမဲ့ အ၀ါရောင်အကျီအတွက် အဖြေကတော့ ဒီနေ့ ၂၀ ရက်ပွဲစဉ်မှာရထားတာကို အပြောင်းအလဲမဖြစ်နုိုင်တော့ပါဘူး။
အဓိပါယ်ကတော့ Quintana (Col) Movistar Team မနက်ဖြန်မှာ သေအောင်ကောင်းနေပါ စေ။ Christopher Froome (GBr) Team Sky ကိုပြတ်နေတဲ့ 0:01:12 မီနစ်ကို ဘယ်လုိုမှ ပြန်မဖြည့်နုိုင်တော့ပါ။ နောက်ဆုံးနေ့မှာ ဒီလုိုဖြည့်နုိုင်ဖို့ အကြိတ်အနယ်ပြိုင်တဲ့ ထုံးစံလဲမရှိပါ။
ဒါကြောင့် အ၀ါရောင်အကျီပုိုင်ရှင် GC ကုို Christopher Froome က ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ဖြန် တာထွက်တာနဲ့ Christopher Froome နဲ့ စကုိုင်းအသင်းသားအားလုံး စက်ဘီး စီးရင်း ရှန်ပိန်သောက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆုိုရင်တော့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကအတုိုင်း Christopher Froome က ပထမ နဲ့ Quintana က ဒုတိယ ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူ အစိမ်းရောင်အကျီကုိုလဲ Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo က ၄ နှစ်ဆက် တုိုက်ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ဖြန် ပါရီအ၀င် Champs-Elysees မှာ နာမည်ကြီး Sprinter တဦးဦးအနုိုင်ရမှာသေချာပေမဲ့ အဲဒီလူဟာ Sagan ဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ပြသာနာမရှိ။ သူရဲ့လက်ရှိအမှတ်က 420၊ ဒုတိယ နေရာက ကပ်လုိုက်နေသူ André Greipel (Ger) Lotto Soudal က 316၊ John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin က 281 နဲ့ Mark Cavendish (GBr) Etixx - Quick-Step က 192 ဆုိုတော့ တခြားလူတွေ ပထမ ရ ရင်တောင် အများဆုံးအမှတ်က ၅၀ ပဲရမှာမုို့ အစိမ်းရောင်ကုို ဆာဂန်က ရထားပြီးသားဖြစ် နေပါပြီ။
လူငယ်ခြေတက် အဖြူရောင်အကျီကုိုတော့ GC ဒုတိယရတဲ့ ကင်တားနားက ရထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူ-နီ-ကျား တောင်တက်ဘုရင်ဆုကိုတော့ Quintana နဲ့ Froome ဘယ်သူရ မလဲ မသေချာသေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် တခြားတဦးကိုလဲ ပေးကောင်းပေးနုိုင်ပါတယ်။
မနက်ဖြန် Champs-Elysees မှာ ပထမ ရနုိုင်တဲ့သူကုို ဟောကိန်းထုတ်ပါဆုိုရင်တော့ ရှေ့မှာ တင်ပြခဲ့တဲ့ Peter Sagan, André Greipel, John Degenkolb, Mark Cavendish နဲ့ Alexander Kristoff တုို့ ၅ ဦးထဲက တဦးရလိမ့်မယ်လုို့ ဟောကိန်းထုတ်လုိုက်ပါတယ်။ ။
သတင်း ၃ ပတ်ကြာ Tour de France ပြိုင်ပွဲ Chris Froome အ၀ါရောင် အကျီရရှိ။
ပြင်သစ်နုိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၂၁ ရက်ကြာ ကမ္ဘာ့နာမည်အကြီးဆုံး ပရုိုဖက် ရှင်နယ် စက်ဘီးပြိုင်ပွဲ Tour de France ၂၁ ရက်မြောက်နေ့၊ နောက်ဆုံးနေ့ ပွဲစဉ်မှာ André Greipel (Ger) Lotto Soudal က 2:49:41 နဲ့ ပထမ ရသွား ပါတယ်။
ပဲရစ်မြို့ အောင်ပွဲခံလမ်းမကြိး Champs-Elysees ကုိုပတ်စီးတဲ့ပွဲမှာ ဒုတိယ ရသူကတော့ Bryan Coquard (Fra) Team Europcar ဖြစ်ပြီး တတိယ ကုိုတော့ နော်ဝေးနုိုင်ငံသား Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha တုို့ ရရှိပါတယ်။
နောက်ဆုံးနေ့ပွဲမှာ ပထမ ရဖုို့ အခုလုို အကြိတ်အနယ်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့ ၂၁ ရက်ပေါင်း ပထမ သုို့မဟုတ် အ၀ါရောင်အကျီကတော့ မနေ့ပြောခဲ့တဲ့အတုိုင်း Christopher Froome (GBr) Team Sky ကပဲ 84:46:14 နာရီနဲ့ အေးဆေး စွာရရှိ သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
Sèvres - Grand Paris Seine Ouest ကနေ Paris Champs-Elysees အထိ 109.5 km ကီလုိုမီတာပွဲမစခင်ကတည်းက မုိုးရွာပြီးရာသီဥတုဆုိုးနေတဲ့အတွက် တာထွက်စဉ်ကနေ ပါရီ မြို့ထဲရောက်တဲ့အထိ ဖြေးဖြေးချင်းသာ စီးနင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ရာသီဥတုအကြောင်း ကြားဖြတ်တခုပြောရမယ်ဆုိုရင် Tour de France အုပ်စု တာမထွက် ခင်မှာ La Course လုို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီး စက်ဘီးအသင်းများရဲ့ ချန်ပီလုပွဲကို ပါရီမြို့လယ် Champs-Elysees လမ်းမပေါ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဖြစ်လုို့ အရှိန်မထိမ်းတတ် တာလားမသိပါဘူး။ မုိုးရွာလုို့ ချောနေတဲ့လမ်းပေါ် လဲလုိုက်တဲ့အကြိမ် မနည်းလှပါဘူး။
ဒီတော့အမျိုးသားအဖွဲ့က ညနေ ၄ ခွဲလောက်မှာတာထွက်ပြီး မြို့ထဲ အေးအေးဆေးဆေးဝင် လာပါတယ်။ မုိုးကတဖြေးဖြေးနဲ့ပါးလာပြီး တဖြေးဖြေးချင်းအရှိန်တက်လာပါတယ်။ ပါရီမြို့ကို ၁၀ ပတ် ပတ်တဲ့အထဲက နောက်ဆုံး ၄ ပတ်လောက်ကျန်မှာမှ အရှိန်စတင်ပြီး ၃ ဦးပါ Breakaway အဖွဲ့တခု ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စက္ကန့် ၃၀ ထက်ပိုပြီးမပြေးနုိုင်ပါဘူး။ ၂ ပတ်အလုိုမှာတော့ နောက်တဦးပါ ထပ် ထွက်ပြေးပြီး အဲဒီ ၃ ဦးနဲ့သွားပေါင်းတဲ့အတွက် ရှေ့ပြေးအဖွဲ့မှာ ၄ ဦးဖြစ်သွားပါတယ်။
(နောက်ဆုံးနေ့ဟောကိန်းနဲ့ Greipel ...)
မနေ့ညနေက ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တဲ့အတုိုင်း နောက်ဆုံးနေ့ Champs-Elysees လမ်းမပေါ် ပထမ ရမဲ့သူဟာ နာမည်ကြီး Sprinter ၅ ဦးထဲက တဦးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆုိုတဲ့အတုိုင်း Point အစိမ်းရောင်အကျီအတွက် ဒုတိယ နေရာက ကပ်လုိုက်နေသူ André Greipel (Ger) Lotto Soudal က ပထမ ရသွားပါတယ်။
တတိယ အဖြစ်လဲ ကျနော်မှန်းခဲ့တဲ့ ၅ ဦးထဲက တဦးဖြစ်သူ Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha ကရရှိပါတယ်။ လွဲတာဆုိုလုို့ ဒုတိယ ရသွားတဲ့ ပြင်သစ်လူငယ်လေး Bryan Coquard (Fra) Team Europcar တဦးသာရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ ပထမ ရအောင်ကြိုး စားမယ်လို့ပြောခဲ့သူ၊ အရင်ကလည်း ရနေကြဖြစ်သူ Mark Cavendish (GBr) Etixx - Quick-Step ကတော့ ဒီနေ့ပွဲမှာ ကံခေပြီး နံပတ် ၆ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
(အ၀ါရောင်အကျီ၊ Christopher Froome နဲ့ Team Sky...)
မနေ့က ကြိုတင်အစီရင်ခံခဲ့တဲ့အတုိုင်း ၂၁ ရက်တာအတွက် ပထမ အ၀ါရောင်အကျီကုို Christopher Froome က အေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ ယူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ မုိုးရွာထဲ တာစထွက်စဉ်ကတည်းက ရှန်ပိန်သောက် အောင်ပွဲခံခဲ့ပြီးသားပါ။ သူ ဒီလုိုရနုိုင်အောင် စကုိုင်း အသင်းသားတွေက အများကြီးကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အသင်းလုိုက် ပထမ ဆုကိုတော့ စကုိုင်းကမရပဲ ဒုတိယ ရတဲ့ ကင်တားနားရဲ့ Movistar Team အသင်းက 55:24:24 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။ Team Sky က 0:57:23 မီနစ်နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ ဆာဂန်တုို့ရဲ့ Tinkoff-Saxo 1:00:12 နာရီနောက်ကျ ပြိး တတိယရပါတယ်။
(အ၀ါ၊ အစိမ်း၊ အဖြူနဲ့ ပျောက်ကျား အကျီပုိုင်ရှင်များ...)
၂၁ ရက်တာအတွက် ပထမ ဆု အ၀ါရောင်ကျီကုို Team Sky မှ Christopher Froome ရ သွားပြီး ဒုတိယနဲ့ တတိယ ကိုတော့ Movistar အသင်းမှ Nairo Quintana (Col) နဲ့ Alejandro Valverde (Spa) တုို့ကရရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်ရလာဒ်ဟာ ၂၀၁၃ နဲ့အတော်တူပြီး ပထမ ရသူနဲ့ ဒုတိယ ရသူတုို့ဟာ ၂၀၁၃ တုန်းကလည်း အခုလုိုပဲ ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။
အစိမ်းရောင်အကျိ Point အများဆုံးဆုကုိုတော့ Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo က 432 မှတ်နဲ့ ရသွားပါတယ်။ သူဟာ အရင်နေ့တွေက Breakaway တွေထဲပါပြီး ရသမျှ Point တွေကိုယူနုိုင်တဲ့အတွက် အခုလုိုရသွားတာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆုိုရင် ဒီနေ့ ပထမ ရတဲ့ André Greipel (Ger) Lotto Soudal က ပထမ ရတဲ့အတွက် Point ၅၀ ထပ်ရတာကြောင့် မနေ့က အမှတ်မှာ ၅၀ ထပ်ပေါင်းပြီး 366 မှတ်အထိရှိလာလုို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လုိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပီတာဆာဂန်ဟာ အစိမ်းရောင်အကျီကုို ၄ နှစ်ဆက်တုိုက်ရသူအဖြစ် မှတ် တမ်းဝင်သွားပါတယ်။ တခါ ဒီနှစ်ပွဲအတွင်း ပထမ တကြိမ်မှ မရလုိုက်ပေမဲ့ ဒုတိယ ချည်း ၅ ကြိမ်ရသူ။ ၄ နှစ်တာပွဲစဉ်အတွင်း ဒုတိယ ၁၆ ကြိမ်ရသူအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်သွားပါတယ်။
အဖြူရောင်အကျီ လူငယ်ခြေတက် စက်ဘီးသမားဆုကိုတော့ တပွဲလုံးအတွက် ဒုတိယ ရသူ ကုိုလံဘီယာလူငယ် Nairo Quintana (Col) Movistar Team က ရသွားပါတယ်။ ၂၁ ရက် စလုံးအတွက် တောင်တက်ဘုရင်ဆု ဖြူ-နီ ကွက်ကျားအကျီကိုတော့ ပထမ ရတဲ့ Christopher Froome ကပဲ ပူးတွဲရယူသွားခဲ့ပါတယ်။
(၂၁ ရက်တာအပြီး GC ၁-၁၀ ရသူများ...)
Final general classification after stage 21# Rider Name (Country) Team Result
၂၁ ရက်ကြာ မဟာပြိုင်ပွဲကြီးတခုပြီးသွားလုို့ စက်ဘီးသမားတွေနားသလုို ကျနော်လည်း ခေတ္တအနားယူပါ့မယ်။ လာမဲ့သြဂုတ်လထဲ စပိန်မှာကျင်းပမဲ့ ဒီနှစ်အတွက် နောက်ဆုံး ၂၁ ရက်တာပွဲ (22 August- 13 September) VueltaaEspaña ကျမှ ပြန်ဆုံကြပါစုို့လုို့ နှုတ် ဆက်လုိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီကြားထဲမှာလည်း အချိန်ရမယ်ဆုိုရင် WT အဆင့်ပွဲတုိုလေးတွေဖြစ်တဲ့ ... (03 August- 09 August) Tour of Utah။ (10 August- 16 August) Eneco Tour Road Netherlands/Belgium။ (13 August- 16 August) Arctic Race of Norway Road Norway တုို့ကုိုလည်း ကြိုးစားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
12:50 AM Htet Aung Kyaw No comments
Sunday, July 26 , 2015. The Voice Daily.
၀ါဆို ၀ါခေါင် ရေဖောင်ဖောင်ဆုိုတဲ့အတုိုင်း မြန်မာနဲ့ အာဆီယံ ဒေသနုိုင်ငံတွေမှာ ရေးကြီး ရေလျှံမှုတွေ ဖြစ်နေပေမဲ့ နော်ဝေးနဲ့ ဥရောပမှာတော့ ဒီအချိန်ဟာ နွေရာသီဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဇူလုိုင်လဟာ ဥရောပသားတွေ ဟောလီးဒေး (Vacation) ထွက်တဲ့လ ပါ။
လူ ၅ ဦးမှာ ၄ ဦး ဒီရာသမီမှာ ဟောလီးဒေးထွက်တယ်လို့ နော်ဝေးမီဒီယာတွေကရေးပါတယ်။ အဲဒီထဲက ၅၁ ရာခုိုင်နှုန်းဟာ နုိုင်ငံရပ်ခြားဆီထွက်ကြပြီး နေရာအသစ်၊ ယဉ်ကျေးမှုအသစ်၊ အစားအသောက်အသစ် အဆန်းတွေကို ရှာဖွေကြတယ်လုို့ဆုိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖြစ်မယ်။ ဇူလုိုင်လဆန်းပုိုင်းကစပြီး အခု တတိယ သတင်းပတ်အထိ အော်စလုိုမြို့လယ်လမ်းတွေ၊ ကုန်တုိုက်တွေ၊ ကားဂိတ်တွ၊ မြေအောက်ရထားဘူတာ တွေမှာ လူအတော်နည်းသွားတာ၊ ချောက်ကပ်ကပ်ဖြစ်သွားတာကို သတိထားမိပါတယ်။
ဒီနှစ်နွေမှာ ပြည်ပခရီးမသွားဖြစ်တဲ့ ကျနော်ကတော့ နော်ဝေးနုိုင်ငံရဲ့ အနောက်တောင်အရပ်ရှိ ကမ္ဘာကျော် ကျောက်ဖျာတခုဆီ သွားလည်ဖုို့ ဆုံးဖြတ်လုိုက်ပါတယ်။ နော်ဝေးဘာသာနဲ့ Preikestolen ၊ အင်္ဂလိပ် ဘာသာနဲ့ the Pulpit Rock လုို့ခေါ်တဲ့ ဒီကျောက်ဖျာဟာ ချင်းတုိုင်းရင်းသားအများစုပါတဲ့ မြန်မာနုိုင်ငံသားတွေ ရာနဲ့ချီအခြေချနေထုိုင်တဲ့ ရေနံမြို့တော် Stavanger ဒေသမှာရှိပါတယ်။
လေယဉ်လက်မှတ်ဝယ်ပြီး အဲဒီမြို့ဆီ ကျနော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်က မနက် ၁၁ နာရီလောက်ပဲရှိပါ သေးတယ်။ ကျောက်တုံးကြီးဆီ ဘယ်လုိုသွားရမလဲ၊ အခုသွားရင် ညနေပြန်ရောက်နုိုင်သလားဆုိုပြီး မေးကြည့်တော့ “ဟောဒီ ဆိပ်ကမ်းကနေ Ferry စီးပါ။ ဟုိုဖက်ကမ်းရောက်ရင် ဘတ်စ်ကားကြိုနေပါလိမ့် မယ်။ ကားဂိတ်ဆုံးကနေ ကျောက်တုံးဆီလျောက်မယ်ဆုိုရင် အနည်းဆုံး ၂ နာရီခွဲ ကြာနုိုင်ပါတယ်” ဆုိုပြီး ဟုိုတယ်ဝန်ထမ်းကဖြေပါတယ်။
လှေနဲ့ ကားစီးချိန်ကလည်း တနာရီလောက် ထပ်ကြာဦးမယ်တဲ့။ အားလုံးပေါင်းလုိုက်တော့ အသွားတခြမ်း တင် ၃ နာရီကျော်နေပြီ။ အပြန်နဲ့ပေါင်းရင် ၇ နာရီထားလုိုက်။ တောင်ပေါ်မှာ ဟုိုငေး၊ ဒီ ကြည့် လုပ်မဲ့အချိန်ပါ ပေါင်းရင် အနည်းဆုံး ၈ နာရီလောက် အချိန်ယူရမဲ့ခရီးပေါ့။ နွေရာသီဖြစ်လုို့ ၁၀ နာရီမှ နေ၀င်တယ်ပဲထား။ အဲဒီကပြန်တဲ့ နောက်ဆုံးဘတ်စ်ကားက ည ၉ နာရီအထိပဲ ရှိသတဲ့။
ဒါတွေကို ကုိုယ်က အသေးစိပ်သိမထားပါ။ Stavanger နဲ့ Preikestolen က ၂၅ ကီလုိုပဲဝေးတယ်ဆုိုတော့ နာရီဝက်လောက် ဘတ်စ်ကားစီးရင် အေးဆေးရောက်ပြီပေါ့။ တောင်ပေါ်တက်တယ်ဆုိုရင်လည်း ကျိုက်ထိးရုိုးစေတီဆီ တက်သလုိုမျိုး ကားနဲ့တက်ပြီး နည်းနည်းပဲ လမ်းလျောက်ရမယ်လုို့ ထင်ထားခဲ့တာပါ။
အခုတော့ အဲဒီလုိုမဟုတ်။ ရာသီဥတုကလည်း နေ မသာပဲ မုိုးက ခပ်အုပ်အုပ်။ လမ်းမှာမုိုးမိရင် ဒုက္ခ။ လေကလည်း တုိုက်သလားမမေးနဲ့။ ဒီတုိုင်းဆုိုရင်တော့ ဒီနေ့အတွက် စိတ်လျော့မှ ဖြစ်မယ်။ မနက်ဖြန်စောစောမှ ထတက်တော့မယ်လုို့ ဆုံးဖြတ်လုိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီအထိလာပြီးမှ ဟုိုတယ်ပေါ်ဒီတုိုင်းတက်အိပ်နေလုို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ တန်အောင်လျောက်လည်မှ ဆုိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ မြို့ထဲလမ်းလျောက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ Stavanger ဟာ နော်ဝေးနုိုင်ငံရဲ့ စတုတ္တ အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ တသိန်းခွဲနီးပါးရှိတဲ့ ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ နုိုင်ငံတကာရေနံကုပ္ဗဏီတွေ ရုံးစုိုက်တဲ့မြိုံ၊ ပင်လယ်ကူးသဘောင်္တွေ ဆုိုက်ကပ်တဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက် အတော်စည်ကားပါတယ်။
ပြီးတော့ ထူးထူးခြားခြား အဖြူရောင်၊ အ၀ါနုရောင်ဆေးသုတ်ထားတဲ့ သစ်သားအိမ်ဟောင်း အတော် များများကို မြို့လယ်မှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ၁၈ ရာစုနဲ့ ၁၉ ရာစုက သစ်သားအိမ်တွေဖြစ်ပြီး heritage ရှေ့းဟောင်းအမွေ အနှစ်ဖြစ် ထိမ်းသိမ်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ ဆုိုပါတယ်။ ထိမ်းသိမ်းထားတယ်ဆုိုတာ ပြတုိုက်လုိုမျိုး ဘယ်သူမှ မတုို့မထိပဲ ထားတာမျိုးမဟုတ်ပါ။ သူ့အိမ်ကိုယ့်အိမ်လုိုပဲ သာမန်လူတွေ မိသားစုအလိုက်နေထုိုင်နေတဲ့ မြို့ထဲကပုံမှန် လူနေအိမ်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနုိုင်ငံမှာတော့ လူနေအိမ်ကို ဒီလုိုထိမ်းထားဖုို့နေနေသာသာ ရှေးဟောင်း တုိုင်တရာဘုန်းကြီး ကျောင်းတွေတောင် မရှိတော့ပါဘူး။ သစ်သားကျောင်းအုိုတွေအစား တုိုက်သစ်ကျောင်းဆောက်လှူမှ ခေတ်မီတယ်ဆုိုတဲ့ တကာတွေရဲ့ဆန္ဒအရ နှစ် ၁၀၀ ၀န်းကျင်က ပျဉ်းကတုိုးကျောင်းတွေကိုဖြိုချပြီး ကွန်ကရစ်ကျောင်းဆောင်တွေကို လက်ခံလုိုက်ရတယ်လို့ ကျနော်တုို့ရွာက တောရကျောင်းဆရာတော် မိန့်တာကို သွားအမှတ်ရမိပါတယ်။
နောက်ထပ် ထူးထူးခြားခြားတွေ့မိတာက ရေနံပြတုိုက်။ မြန်မာနုိုင်ငံမှာလည်း ရေနံထွက်ပေမဲ့ ရေနံပြတုိုက်ရှိ တယ် လုို့ တခါမှမကြားမိပါ။ ဒီမှာတော့ ရေနံကုို ဘယ်လိုရှာဖွေတယ်၊ ဘယ်လုိုတူးတယ်၊ ရရှိတဲ့ငွေတွေကို ဘယ်လုို သုံးစွဲတယ် စသဖြင့် အသေးစိပ်ပြသထားပါတယ်။
၁၉၆၀ လွန်နှစ်တွေအတွင်း နော်ဝေးကမ်းလွန်မှာရေနံစတွေ့တဲ့အချိန်ဟာ မြန်မာနုိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က အာဏာ စသိမ်းတဲ့အချိန်ပေါ့။ အဲဒီလုိုရေနံမတွေ့မီအထိ နော်ဝေးဟာ ဘာမှတုိုးတက်ကြီးပွါးမှု မရှိသေးပါ။ မြန်မာနုိုင်ငံက အဲဒီ အချိန်မှာ အာဆီယံရဲ့ စီးပွါးရေးထိပ်ဆုံး။ ဒါပေမယ့် အခု ၅၅ နှစ်လောက်ကြာ ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ ရေနံထွက်တာခြင်းတူတဲ့ နုိုင်ငံ ၂ ခု ဘယ်လောက်အထိ ကွာခြားသွားသလဲ။ ဘာကြောင်လဲ။
တကယ်တော့ ရေနံဆုိုတာ တူးပြီးရောင်းစားရုံနဲ့ ကိစ္စပြီးတာမဟုတ်။ ရေနံတွေတူးလုို့ကုန်သွားရင် ဘယ်လုို လုပ်မလဲ၊ ဒီအတွက် ရေနံအစား တခြားစွမ်းအင်တွေကိုရှာဖုို့ နော်ဝေးကကြိုးစားနေပါတယ်။ လောင်စာကို မီးရှို့ရာကနေ ထွက်လာတဲ့ အပူငွေ့တွေဟာ လေထုညစ်ညမ်းမှုကို အတော်ဆုိုးဝါးစေတယ်လုို့ဆုိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေနံ၊ ဓာတ်ငွေ့၊ ကျောက်မီးသွေးလုို တွင်းထွက်လောင်စာတွေအစား မီးခုိုးမထွက်တဲ့ (ကာဗွန် မထွက်တဲ့) ရေအား၊ လေအား၊ နေ အားနဲ့ လည်နုိုင်မဲ့ စွမ်း အင်တွေကို နော်ဝေးက ဦးဆောင်ပြီး ရှာဖွေနေတယ်။
၂၀၂၀ မှာ အားလုံးအစားထုိုး ပြောင်းသုံးနုိုင်ဖုို့မသေချာသေးပေမဲ့ ၂၀၄၀ လောက်ဆုို တကယ်ဖြစ်လာနုိုင် တယ်လို့ ဆုိုပါတယ်။ မြန်မာနုိုင်ငံမှာတော့ အခုထိ ရေနံတွင်းသစ်တွေ၊ ဓာတ်ငွေတွင်းသစ်တွေ၊ ကျောက်မီးသွေးတွင်းသစ် တွေ ရှာဖွေတူးဖေါ်လုို့ကောင်းတုန်း၊ လျှပ်စစ်မီးမရသူက ၇၀ ရာခုိုင်နှုန်းအထိ ရှိနေတုန်း။
Preikestolen ဆီ ချီတက်ပါတော့မည်
နွေလယ်ရာသီဆုိုပေမဲ့ ကမ်းရုိုးတန်းမြို့ရဲ့အပူချိန်က ၁၅ ဒီဂရီလောက်ပဲရှိပါတယ်။ လေတုိုက်နှုန်းကလည်း ၆-၇ ကီလုို လောက်ပြင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ မုိုးမရွာဘူးလုို့ပြထားတဲ့အတွက် မနက် ၈ နာရီခွဲလောက် ကတည်းက သဘောင်္ဆိပ်ဆီ ကျနော်ရောက်နေပါတယ်။ ဒီမြို့ကနေ Tau အထိ သဘောင်္စီး၊ ပြီးမှ ဘတ်စ်ကားနဲ့တဆင့် တောင်ခြေအထိသွား၊ အဲဒီကုိုရောက်မှ လမ်းလျောက်တက်ရမယ်တဲ့။ ဒီအတွက် အသွားအပြန် လှေခ၊ ကားခ ၂၅၀ ခရုိုနာ။
တကယ်လို့ လမ်းမလျောက်ချင်ဘူး၊ တောင်မတက်နုိုင်ဘူးဆုိုရင် ဒီနေရာကနေ ရေလက်ကြားတလျောက် သွားတဲ့ သဘောင်္ကုိုစီး။ အသွားအပြန်မှ ၃ နာရီဝန်းကျင်ပဲကြာမယ်။ ကျောက်ဆောင်ပေါ် မရောက်နုိုင်ပေမဲ့ ရေထဲကနေ အပေါ်မော်ကြည့်ပြီး ပြန်လာနုိုင်တယ်။ ဒီအတွက် လှေခက ၄၂၀ ခရုိုနာ။
ကုိုယ်က ကျောက်ဆောင်ပေါ်တက်ချင်သူဆုိုတော့ ပထမ နည်းကိုပဲရွေးလုိုက်ပါတယ်။ ဒီနည်းက မေလ ၁ ရက်နေ့ ကနေ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့အထိ (၆ လ) ပဲ ရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်သွားချင်တယ်ဆုိုရင် ဒုတိယ နည်းကုိုသာရွေးပေတော့။ Ferry ဆိုပေမဲ့ မော်လမြိုင်-မုတ္တမ (သံလွင်တံတားမရှိခင်က) ပြေးတဲ့ ဇက်တွေလုို ခပ်သေးသေးမဟုတ် ပါ။ ကားအစိး ၂၀ လောက် တင်နုိုင်တဲ့ ၂ ထပ် ရေယဉ်ကြီး။
လှစီး၊ ကားစီးပြီး တနာရီလောက်အကြာမှာတော့ တောင်ခြေရင်း ဟုိုတယ်ဆီရောက်သွားပါတယ်။ ဟုိုတယ်လည်း လူလျှံနေပြီထင်ပါရဲ့။ ဘေးနားက မျက်ခင်းပြင်နဲ့ သစ်တောစပ်ကကွင်းပြင်ထဲမှာ ရွက်ဖျက်တဲထုိုးပြီး နေရာယူထားသူတွေက ရာနဲ့ချီရှိနေပါတယ်။ အတော်များများက အိပ်ခန်း၊ မီးဖုိုခန်းတွေပါတဲ့ အပန်းဖြေခရီးထွက်တဲ့ ကားတွေနဲ့။ ကျနော်နဲ့အတူ တောင်တက်သူတွေထဲမှာတော့ ဘတ်စ်ကားစီးလာသူက အများစုပါ။
၂ နာရီခွဲစာ တောင်တက်ခရီးကို ဘယ်လုိုသွားရမလဲဆုိုပြီး ကုိုယ်ကစိုးရိမ်နေပေမဲ့ အနောက်တုိုင်းသား ပင်စင်စား အဖုိုး၊ အဖွားတွေက တုတ်ကောက်ကုိုယ်စီနဲ့ ကိုယ့်ကုိုကျော်တက်သွားခဲ့ပေါ့။ တချို့လူလတ်ပုိုင်း တွေက လသားခလေးငယ်လေးကုိုတောင် ကျောမှာပုိုးပြီးခပ်သွက်သွက်တက်လုို့။ ကျောင်းသားလေးတွေ၊ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေကတော့ ခုပေါက်ပြေးလွှားပြီး ဖြတ်ကျော်သွားကြလေရဲ့။
တောင်ခြေကနေ ကီလုိုဝက်ခန့် မတ်စောင့်လှတဲ့ တောင်ကိုတက်ပြီးတဲ့နောက် နားနေစခန်း မြေပြန့်နေရာ လေးတခုကုို တွေ့ပါတယ်။ လူသွားလမ်းကြမ်းမှအပ သစ်ပင်ကြီးတွေ၊ ကျောက်ဆောင်ကျောက်တုံးတွေက တကယ့်သဘာဝအတုိုင်း။ သစ်မြစ်တွေက လမ်းပေါ်မှာ ကန့်လန့်ခံလုိုခံ၊ ကျောက်တုံးတွေက မညီညာတဲ့ လှေကားထစ်တွေ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကျော်က တက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျိုက်ထီးရုိုးတောင်တက်လမ်းကို လွမ်းချင် စရာကြီး။
ပထမ ဆုံးတောင်ကုို မြင့်လှပြီလုို့ထင်ပေမဲ့ နောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့တောင်အားလုံးက သူ့ ထက်မြင့်တာချည်း ပါ။ ထူးခြားတာကတော့ လူတွေထောင်၊ သောင်းချီသွားနေပေမဲ့ လမ်းကိုအသေချာပြင်ထား မပေးပါ။ သဘာဝအတုိုင်း ရှိနေအောင် တမင်ပစ်ထားပုံရပါတယ်။ တချို့ရေအုိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ လူနှစ်ဦး အသွား-အပြန် လျောက်သာရုံ သစ်သားတံတားလမ်းလေးထုိုးပေးထားပါတယ်။ တောင်ခြေကနေ တောင်ထိပ်အထိ ၄ ကီလုိုသာရှိတယ်ဆုိုပေမဲ့ ၁၄ ကီလုိုနဲ့မှား နေသလား၊ မရောက်နုိုင်တော့ပါလားဆုိုပြီး ခံစားရပါတယ်။
၂ ကီလုိုမှတ်တုိုင်အနီးရှိ တောင်ကျောက မတ်စောင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး ကျောက်ဆောင်ကို တွယ်တက်ရတဲ့အတွက် လူကုို ''ဟောဟဲ'' ဖြစ်စေပါတယ်။ ရေကလဲစိုနေတော့ ဖိနပ်မကောင်းရင် ဂျိုင့်ထဲချော်ကျနုိုင်ပါတယ်။ ဖိနပ် ဆုိုလုို့ ဒီတောင်ပေါ် တက်မယ်ဆုိုရင် ခပ်ကောင်းကောင်း လမ်းလျောက်ဖိနပ်စီးလာဖုို့လုိုပါတယ်။ ၀တ်စုံ ကလည်း အားကစားဝတ်စုံနဲ့မှ အဆင်ပြေ နုိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခပ်သေးသေးကျောပုိုးအိတ်ကိုလွယ်ပြိး အဲဒီထဲမှာ ရေ၊ အဆာပြေစားစရာနဲ့ သစ်သီးတချို့ ထည့်လာဖုို့လုိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆုိုရင် အသွား-အပြန် ၅ နာရီကျော်ခရီးစဉ်အတွင်း ဘာဆုိုင်၊ ဘာတဲမှ မရှိပါ။ ကျိုက်ထီးရုိုးတောင်နဲ့ မတူပါ။
တောင်ထိပ်ဆီရောက်ဖုို့ တကီလုိုခန့်အလုိုမှာတော့ ရွှေရင်စုို့ တောင်ကျောလုို့ခေါ်နုိုင်တဲ့ တကယ့်ကို တောင်နံရံ ပါးပါးလေးပေါ် ကပ်လျောက်သွားရတဲ့ လမ်းကျဉ်းလေးကိုဖြတ်ရပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ လက်ကုိုင်စရာနံရံပါတဲ့ သစ်သားတံတားငယ်ဆုိုလုို့ ဒီနေရာလေးတခုပဲရှိပါတယ်။ ကျန်နေရာတွေအားလုံး ပုိုးလုံးပက်လက်။
အဲဒီ ရွှေရင်စုို့ တောင်ကျောကိုကျော်ပြီးတာနဲ့ ကျောက်ဆောင်ကြီးအောက်က ရေလက်ကြားကို လှမ်းမြင် ရပါတယ်။ ပေ ၂၀၀၀ လောက်နက်တဲ့ ရေလက်ကြားနဲ့ တောင်နံရံကြားက လူသွားလမ်းပါးပါးလေးက ၃ ပေ၀န်းကျင်တောင် မရှိ။ ဘာအကာအရံမှလည်းမရှိ။ အသွားမတော်တလှမ်းဆုိုသလုို ခြေနဲနဲချော် သွားလုို့ကတော့ မတွေးဝံ့စရာ။
ကုိုယ်ကသာ မတွေးဝံ့ဖြစ်နေတာ။ လူငယ်တွေက ပြေးလွှားခုန်ပေါက်လုို့။ အဲဒီ လမ်းကျဉ်းလေးကုို ကျော်လုိုက်တာနဲ့ ကမ္ဘာကျော် Preikestolen သုို့မဟုတ် the Pulpit Rock ဆီရောက်ပြီလေ။ Wow! တကယ့်ကို အံ့မခန်းမြင်ကွင်းပါပဲ။ သဘာဝအလှဟာ တခါတရံမှာ စိတ်ကူးယဉ်ထားတာထက်တောင် ပုိုလှနေတတ်ပါကလား။
ဒီကျောက်ဖျာရဲ့အကျယ်ဟာ ၂၅ မီတာ (၇၅ ပေ၀န်းကျင်) ပတ်လည်ရှိတယ်လို့သိရပေမဲ့ လူများလွန်းလုို့ ခြေချစရာ နေရာတောင် မရှိပါဘူး။ အထူးသဖြင့် လာလည်သူတုိုင်း ဓာတ်ပုံရုိုက်ကြတဲ့ ကျောက်ဖျာရဲ့ အစွန်နေရာမှာ ဓာတ်ပုံရုိုက်နုိုင်ဖုို့အရေး ၁၀ မီနစ်ခန့် တန်းစီစောင့်ရပါတယ်။ ဒီကျောက်ဖျာဟာ အောက်မှာမြင်နေရတဲ့ Lysefjord ရေလက် ကြားမျက်နှာပြင်ထက် ၆၀၄ မီတာ (ပေ ၂၀၀၀ နီးပါး) မြင့်ပါတယ်။ ဒီလောက်သဲထိပ်ရင်ဖုို ကျောက်ဖျာစွန်းမှာမှ ခြေချိတ်ထုိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံရုိုက်ရဲတဲ့ သူကရှိသေး။
အမြင့်ကြောက်တဲ့ ကုိုယ်ကတော့ ခြေတွေလက်တွေ တုန်လုို့။ ဒီထက်ပုံကောင်းကောင်းရချင်ရင် ဒီကျောက် ဖျာ နောက်ကျောက တောင်ကုန်းပေါ်တက်ပြီး အပေါ်စီးကနေရုိုက်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီလုိုရုိုက်နုိုင်ဖို့ လူငယ်အတော်များများ ကျောက်တုံးတွေကိုဖက်ပြီးတက်နေကြပေမဲ့ ကုိုယ်က ဆက်မတက်ရဲတော့ပါ။ လူတုိုင်းတက်နုိုင်အောင် လူသွားလမ်းအဖြစ်လဲ ပြင်ထားမပေးပါ။
တကယ့်ကုို သဘာဝအတုိုင်းရှိနေတဲ့ ကျောက်တောင်ကြီး။ ဒီကျောက်ဖျာကိုမြင်ရဖုို့အရေး နှစ်စဉ် ဧည့်သည် ၂ သိန်း ခွဲခန့် လာလည်လေ့ရှိတယ်လုို့သိရပါတယ်။ တချို့ဧည်တွေက ကျောက်ဖျာကြီးကုို ဒီတုိုင်း အကာ အရံမရှိပဲ ထားတာဟာ အန္တာရယ်များလွန်းတယ်၊ အချိန်မရွေးပြုတ်ကျနုိုင်တဲ့အတွက် ကျောက်ဖျာ ဘေးနားတလျောက်ကုို သံတုိုင်တွေနဲ့ အခုိုင်အမာခြံစည်းရုိုးခတ်ထားသင့်တယ်လုို့ အကြံပြုဖူးတယ် ဆုိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နော်ဝေးအာဏာပုိုင်တွေ ဖက်ကတော့ အဲဒီလုိုကာလုိုက်ရင် သဘာဝ အလှ ပျက်သွားမယ်။ သဘာဝကုို သဘာဝအတုိုင်း ပဲထားသင့်တယ်လုို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
တကယ်လို့ ဒီကျောက်ဖျာကြီးသာ နော်ဝေးမှာမဟုတ်ပဲ မြန်မာနုိုင်ငံမှာရှိနေမယ်ဆုိုရင် အာဏာပုိုင်တွေက ခြံစည်းရုံးခတ်ပြီး ကာကွယ်လေမလား။ ကျိုက်ထီးရုိုးစေတီဆီတက်သလုိုမျိုး တောင်ထိပ်အထိ ကားလမ်း ဖောက်လုိုက်လေ မလား။ ကျောက်ဆောင်ဆီသွားတဲ့လမ်းတလျောက်မှာ ဈေးဆုိုင်တွေ၊ ဟုိုတယ်တွေ ဆောက်ခွင့်ပေးလုိုက်လေ မလား။ သစ်ပင်ကြီးတွေ၊ ကျောက်ဆောင်တွေကြားမှာ ဘီယာဗူးခွံ၊ ရေသန်ဗူးခွံ၊ ပလစတစ်စတွေနဲ့ ရှုတ်ပွနေလေ မလား။ တကယ်တော့ သဘာဝအလှဆုိုတာ သဘာဝအတုိုင်းရှိနေမှ တန်ဖုိုးရှိမယ်မဟုတ်ပါလား။ ။